Dawlada Imaaraadka Oo Dafirtay Xidhiidhka Somaliland | Gabiley News Online
Dawlada Imaaraadka Oo Dafirtay Xidhiidhka Somaliland
Dawlada Isu taga Imaaraadka Carabta oo ka hadlaysay khilaafka Diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horaysay shaaca ka qaaday in ay dalkaasi aqoonsan tahay midnimada wadanka soomaaliya.
Sidoo kale khilaafka labada wadan ee UAE Iyo soomaaliya oo Salka ku haya heshiskad Dekeda Berbera ayaa waxa ay sheegtay in ay kala xaajootay dawladda federaalka soomaaliya ee ka horeysay xukuumadda hada.
Wasiirul dawlaha Wasaaradda arrimaha Dibada ee Imaaraadka Carabta Anwar Gargaash oo u waramayay laanta afka Carabiga ee BBC ayaa yidhi “Arrinta Dekeda Berbera waxa ay ku dhacday isfaham cad oo aanu la yeelanay Dawladihii hore ee Soomaaliya.
Isfahmayadaasina waxa ay ahaayeen kuwo cadcad, waxaanay hoos imanayeen, taageerada Soomaaliya oo mid ah, anagu Qunsuliyad kuma lihin Soomaaliland, xidhiidhna lama lihin, iskaba daayee waxaanu kaalin fududayn ah ku lahayn in aanu kulamo u qabano madaxda soomaalida, waxaanay ku kulmeen Abu Dubai iyo Dubai, kaalintayadu waxa ay ku koobnayd uun fududayn.
Isfahanadu waxa ay ku qotomeen hadii aanu aqoonsanahay siyaasada soomaali mid ah, in aanay naga reebaynin in aanu ka shaqayno, dhinacyada horumarinta, gargaarka iyo kaalmada in aanu soomaaliland ka samayno” ayuu yidhi